Kudya munzvimbo imomo kuri: 2021 Akanakisa Maguta evagari vemunharaunda vanonzi
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Culinary » Kudya munzvimbo imomo kuri: 2021 Akanakisa Maguta evagari vemunharaunda vanonzi
Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Culinary • tsika nemagariro • Health News • nhau • ushanyi • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Kudya munzvimbo imomo kuri mu - zvekare. Munguva yedenda, maAmerican akavandudza chishuwo chavo che "locavore" chikafu, icho chinosanganisira chikafu kubva kunzvimbo dzemuno senge mapindu ari padyo, misika yevarimi, uye maresitorendi etafura.
Asati akiyiwa, dzinoda kusvika nhatu kubva muzana dzevanhu vemuAmerica vanga vachitodya chikafu chakagadzirwa munharaunda. Kuwedzera kwechangobva kuitika mukutengesa kwepurazi-kune-mutengi kunoratidza maitiro ari kuramba achikura.
Asi haazi maguta ese eUS akakodzera zvakaenzana kusangana nezvinodiwa zvevagari.
Ndicho chikonzero nyanzvi dzeindasitiri dzakapwanya nhamba kuti dzione Maguta Akanakisa e2021 eLocoavores.
Nyanzvi dzakafananidza maguta zana nemakumi mashanu makuru eUS pamatanho gumi nemana ekuratidza hushamwari hwenzvimbo. Ivo vanobva kune kuwanda kwenzvimbo-inotsigirwa yekurima uye mapurazi-kune-tafura maresitorendi kune yekutengesa kwepurazi-kune-mutengi chikafu pamunhu.
Zvakafamba sei mumaguta? Heano ekumusoro uye ezasi vatambi gumi, vachiteverwa nemamwe makiyi ekutora.
Akanakisa Maguta eLavores
3 Salem, KANA
Maguta Akashata Kwenharaunda
Suburbs pane Plate: Nepo akawanda emaguta makuru eAmerica achizviwana akaiswa pakati- kusvika pasi-tier, satellite maguta anotonga mazhinji emahara epamusoro pane edu runyorwa. Masabhabhu akaita seVancouver, WA - kuchamhembe kwePortland - uye Yonkers, NY - kunze kweBig Apple - inzvimbo dzakanaka pakati pezvigadzirwa zvemumaguta, zvakaita semabhekaji uye maresitorendi vegan, vachiri kufamba pfupi kubva kumapurazi emuno.
California Yakura: Iyo Golden State inotonga masosi edu, ichitora gumi emaguta epamusoro makumi maviri. Zvikonzero zviri pachena: California isimba rekurima. Chikamu chetatu chemiriwo yese uye zvikamu zviviri kubva muzvitatu zvezvibereko zvese zvemuUS uye nzungu zvinobva kune ino nyika. Zviri nyore chaizvo kudya zvemuno kana huwandu hwenyika hwunopihwa chikafu chiri pasi pemugwagwa.
Hapana Mvura muDesert: Matatu emakumi gumi emaguta akadzika-pasi ari muTexas, aine gumi nerimweth kuderera kwazvo kubva kuLonestar State, zvakare. Amarillo yaive pazasi chaipo pechikamu chedu "Chekuwana", iine shopu imwe chete yekutengesa nyama uye yekugadzira doro kune vagari zviuru zana. Mamwe maguta eTexas akarongeka zvisina mwero, asi aya mana padhuze nepasi ese ari munzvimbo yakaoma West West, uko zvinogadzirwa zvemuno zvinonetsa kuuya.
Jamaica neSaudi Arabia kusaina gwaro rechinangwa ku ...
Southwest Airlines inozivisa Executive Executive Vice ...